Tag: muraayadaha indhaha | Martech Zone
Tag: muraayadaha indhaha
Talaado, Juun 26, 2018 Talaado, Juun 26, 2018 Larry Harris
Sharci-dejin ballaadhan oo loo yaqaan Xeerka Ilaalinta Xogta Guud, ama GDPR, ayaa dhaqan galay Meey 25th. Waqtiga kama dambaysta ah wuxuu lahaa ciyaartoy badan oo xayeysiinta dhijitaalka ah oo xoqanaya iyo inbadan oo ka walwalsan. GDPR waxay saxeysaa qaddar waxayna keeni doontaa isbeddel, laakiin waa isbeddel suuqgeyaasha dijitaalka ah waa inay soo dhoweeyaan, ma ahan cabsi. Waa tan sababta: Dhamaadka Pixel / Kuleylka Ku-saleysan Ku-Fiican Wuu Ku Fiican Yahay Warshadaha Xaqiiqdu waxay tahay in tani ay ahayd mid soo daahday. Shirkadaha ayaa cagaha jiidayay, iyo